Yuunvarsiitichi cuuciwwan Qurxummii kuma 80 ol horsiisuun qonnaan bultoota adda dureef raabse – Welcome to Fana Broadcasting Corporate S.C
Yuunvarsiitichi cuuciwwan Qurxummii kuma 80 ol horsiisuun qonnaan bultoota adda dureef raabse
On Feb 3, 2021 50
Finfinnee, Amajjii 26, 2013 (FBC) – Yuunvarsiitiin Hawaasaa cuuciwwan Qurxummii kuma 80 ol horsiisuun qonnaan bultoota adda dureef raabsuu beeksise.
Yuunvaarsiitichi giddugala horsiisa Qurximmuu ammayyaa hundeessuun gara hojiitti galuu isaa ibseera.
Itti fayyadama qabeenya Qurxummiirratti hubannoo laachuuf qooda fudhattoota waliin magaalaa Hawaasaatti marii gaggeesseera.
Giddu galichi argannoo qoo’annoorratti hundaa’uun Qonnaan bultoonni boolla xiqqoo keessatti dhuunfaa isaaniin Qurxummii akka oomishaniif hojjechaa jiraachuu Preezdaantiin Yuunvarsiitii Hawaasaa Dooktar Ayyaanoo Baraasoon ibsaniiru.
Oomisha Qurxummii galtee nyaatarra darbee gabaaf dhiyeessuun fayyadamoo akka ta’aniif hojjetamaa jiraachuus ibsaniiru.
Qabiinsa Qurxummii, Kiyyeessaa fi horsiisa isaa itti fufiinsaan mirkaneessuuf hayyoota, ogeeyyii fi qonnaan bultoota waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuuf leenjiin hubannoo uumuu kun qophaa’uu Dooktar Ayyaanoon himaniiru.
Teeknooloojiin ragaa barnoota sirrii mirkaneessuu hojiirra…